ခရစ်တော်၌လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာရိုက်ထားသောကမ္ဘာတစ် ၀ ှမ်းဘုရားကျောင်းဆွစ်ဇာလန်
ပညတ်တော်ဆယ်ပါးက“ ဥပုသ်နေ့ကိုသန့်ရှင်းစေရန်ဥပုသ်နေ့ကိုသတိရပါ။ သင်သည်ခြောက်ရက်အလုပ်လုပ်ပြီးသင်၏အလုပ်အားလုံးကိုလုပ်လိမ့်မည်။ သတ္တမနေ့ကားသင်၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရား၏ဥပုသ်နေ့ဖြစ်သည်။ မင်းရဲ့သား၊ သမီး၊ ကျွန်၊ ကျွန်၊ ကျွန်၊ ကျွဲနွားတွေ၊ မင်းမြို့မှာနေတဲ့သူစိမ်းတွေတောင်မင်းဘယ်အလုပ်ကိုမှမလုပ်ရဘူး။ ခြောက်ရက်မြောက်သောနေ့၌ထာဝရဘုရားသည်ကောင်းကင်၊ မြေကြီး၊ သမုဒ္ဒရာနှင့်သူတို့၌ရှိသမျှတို့ကိုဖန်ဆင်း။ ခုနစ်ရက်မြောက်သောနေ့၌ငြိမ်ဝပ်စွာနေတော်မူ၏။ ထို့ကြောင့်ထာဝရဘုရားသည်ဥပုသ်နေ့ကိုကောင်းချီး ပေး၍ သန့်ရှင်းစေတော်မူ၏” (ထွက်မြောက်ရာ ၂၀: ၈-၁၁ LUT) ။ ကယ်တင်ခြင်းရဖို့ဥပုသ်စောင့်ဖို့လိုသလား။ ဒါမှမဟုတ်“ တနင်္ဂနွေကိုစောင့်ဖို့လိုသလား။ ကျွန်ုပ်၏အဖြေမှာ "သင်၏ကယ်တင်ခြင်းသည်တစ်ရက်ပေါ်တွင်မမူတည်ပါ၊ ယေရှုတစ်ခုတည်းအပေါ်မူတည်သည်" မကြာသေးမီကအမေရိကန်မှာသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့ဖုန်းပြောခဲ့တယ်။ သူသည် "ဘုရားသခင်၏ပြန်လည်ပြုပြင်ထားသောဘုရားကျောင်း" နှင့်ပူးပေါင်းခဲ့သည်။ ဒီဘုရားကျောင်းကသင်ပေးတဲ့ ...
သင်တစ်နေ့မှာဆုံးဖြတ်ချက်ဘယ်လောက်ချပါသလဲ။ ရာပေါင်းများစွာသို့မဟုတ်ထောင်ပေါင်းများစွာ? အိပ်ရာမှထသည်အထိ ၀ တ်ရမည့်အရာ၊ နံနက်စာစားရန်၊ စျေး ၀ ယ်မည့်အရာ၊ ကြိုတင်ခန့်မှန်းရန်။ သင်နှင့်ဘုရားသခင်နှင့်သင့်ပတ် ၀ န်းကျင်၌သင်မည်မျှအချိန်ဖြုန်းသနည်း။ အချို့ဆုံးဖြတ်ချက်များသည်ရိုးရှင်းပြီးစဉ်းစားစရာမလိုသော်လည်းအခြားသူများကဂရုတစိုက်ဂရုစိုက်ရန်လိုအပ်သည်။ အခြားဆုံးဖြတ်ချက်များသည်ရွေးချယ်မှုမပြုလုပ်ဘဲ နေ၍ ၎င်းတို့ကိုမလိုအပ်တော့လျှင်သို့မဟုတ်၎င်းတို့ကိုမီးကဲ့သို့ငြိမ်းရန်ကျွန်ုပ်တို့ရွှေ့ဆိုင်းသည်။ ငါတို့ရဲ့အတွေးတွေအတွက်လည်းအတူတူပါပဲ။ ငါတို့စိတ်တွေဘယ်သွားမလဲဆိုတာစဉ်းစားဖို့နဲ့ဘာကိုစဉ်းစားရမလဲဆိုတာကိုရွေးနိုင်တယ်။ ဘာကို ၀ တ်ရမယ်ဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်တာထက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချတာကအများကြီးပိုခက်နိုင်တယ်။ တစ်ခါတစ်ရံမှာငါ့စိတ်ကငါအလိုမရှိတဲ့နေရာကိုသွားနေတယ်၊ ​​သူ့အလိုလိုပေါ်လာတယ်။ ဒါဆိုရင်ဒီအတွေးတွေကိုထိန်းဖို့ငါ့အတွက်ခက်တယ် ...
ခရစ်ယာန်အားလုံးသည်၎င်းကိုသိသည်ဖြစ်စေ၊ မသိသည်ဖြစ်စေခရစ်တော်၏လက်ဝါးကပ်တိုင်၌တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပါ ၀ င်သည်။ မင်းယေရှုကိုလက်ဝါးကပ်တိုင်မှာရိုက်သတ်တုန်းကမင်းအဲဒီနေရာမှာရှိခဲ့လား။ သင်သည်ခရစ်ယာန်တစ် ဦး ဖြစ်သည်၊ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်ယေရှုကိုယုံကြည်လျှင်အဖြေသည်ဟုတ်သည်၊ သင်ရှိနေခဲ့သည်။ အဲဒီတုန်းကငါတို့မသိခဲ့ပေမဲ့ငါတို့သူနဲ့အတူရှိခဲ့တယ်။ ဒါကရှုပ်ထွေးနေပုံရတယ်။ တကယ်ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ။ ယနေ့စကားပြောရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ယေရှုနှင့်အတူရှိသည်ဟုပြောလိမ့်မည်။ ငါတို့ကသူ့ကိုရွေးနှုတ်ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံတယ်။ ငါတို့ရဲ့အပြစ်တွေအားလုံးအတွက်သူသေတာကိုငါတို့လက်ခံတယ်။ ဒါတင်မကသေးပါဘူး။ သူ၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနှင့်သူ၏ဘဝသစ်ကိုငါတို့လည်းလက်ခံသည်၊ ဝေမျှသည်။
«Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Es kommt die Stunde und ist schon jetzt, dass die Toten hören werden die Stimme des Sohnes Gottes, und die sie hören, die werden leben. Denn wie der Vater das Leben hat in sich selber, so hat er auch dem Sohn gegeben, das Leben zu haben in sich selber; und er hat ihm Vollmacht gegeben, das Gericht zu halten, weil er der Menschensohn ist» (Johannes 5,24-27) ။
«Was wollen wir hierzu sagen? Sollen wir denn in der Sünde beharren, damit die Gnade umso mächtiger werde? Das sei ferne! Wir sind doch der Sünde gestorben. Wie können wir noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft? So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, auf dass, wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm zusammengewachsen sind, ihm gleich geworden in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet werde, sodass wir hinfort der Sünde nicht dienen. Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden, und wissen, dass Christus, von den Toten erweckt, hinfort nicht stirbt; der Tod wird hinfort nicht über ihn herrschen. Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben ein für alle Mal; was er aber lebt, das lebt er Gott. So auch ihr: Haltet euch für Menschen, die der Sünde gestorben sind und für Gott leben in Christus Jesus» (Römer 6,1-11) ။
«Also seid auch ihr, meine Brüder und Schwestern, dem Gesetz getötet durch den Leib Christi, sodass ihr einem andern angehört, nämlich dem, der von den Toten auferweckt ist, damit wir Gott Frucht bringen. Denn als wir im Fleisch waren, da waren die sündigen Leidenschaften, die durchs Gesetz geweckt wurden, kräftig in unsern Gliedern, sodass wir dem Tode Frucht brachten. Nun aber sind wir vom Gesetz frei geworden und dem gestorben, was uns gefangen hielt, sodass wir dienen im neuen Wesen des Geistes und nicht im alten Wesen des Buchstabens» (Römer 7,4-6) ။
«Denn die Liebe Christi drängt uns, da wir erkannt haben, dass einer für alle gestorben ist und so alle gestorben sind» (2. ကောရိန္သု 5,14).
«Darum: Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden» (2. ကောရိန္သု 5,17).
«Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt» (2. ကောရိန္သု 5,21).
«Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner grossen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht – aus Gnade seid ihr gerettet ; und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus» (Epheser 2,4-6) ။
«Seid ihr nun mit Christus auferweckt, so sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes.2Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist.3Denn ihr seid gestorben, und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott» (Kolosser 3,1-3) ။
«Das ist gewisslich wahr: Sind wir mit gestorben, so werden wir mit leben» (2. တိမောသေ 2,11).
«Der unsre Sünden selbst hinaufgetragen hat an seinem Leibe auf das Holz, damit wir, den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden» (1. ဓာတ်ဆီ 2,24).
«Das ist ein Vorbild der Taufe, die jetzt auch euch rettet. Denn in ihr wird nicht der Schmutz vom Leib abgewaschen, sondern wir bitten Gott um ein gutes Gewissen, durch die Auferstehung Jesu Christi» (1. ဓာတ်ဆီ 3,21).
«Weil nun Christus im Fleisch gelitten hat, so wappnet euch auch mit demselben Sinn; denn wer im Fleisch gelitten hat, der hat Ruhe vor der Sünde» (1. ဓာတ်ဆီ 4,1).